UYIFAKA NJANI IWINDOWS WINDOW YOKUTSHINTSHA - LUNGELELANISA KWAYE UCOCE
Uyifaka njani iWindows Window yokuTshintsha
Iifestile ezisendlwini yam zingaphaya kweminyaka engama-50 ubudala: i-paned enye, iyavuza, kwaye amanzi adibana kubo ngeentsasa ezibandayo. Kuthathe isibindi, kodwa ekugqibeleni ndaqala ukuyitshintsha, nganye-nganye. Ngoku ndithathe indawo yesine ngempumelelo, bendifuna ukwabelana ngamanyathelo kule projekthi ibonakala ngathi inzima enokwenzeka ngokupheleleyo.
Zimbini iintlobo zokuphuculwa kwefestile phaya: indawo yokutshintsha ngokupheleleyo kunye ne-sash replacement kit-windows. Ngoku ndibeke ngempumelelo ezimbini kuhlobo ngalunye, kwaye ndingatsho ngaphandle kwamathandabuzo ukuba ndikhetha izixhobo zokutshintsha. Emva kokuthetha nabantu abaninzi abathengisa iivenkile kwiindawo ezininzi zehardware kwindawo yam, imvumelwano ibonakala ngathi yile ilandelayo:
Iinkonzo : Nika itywina elingcono kancinci kwaye unokulungela ukufumana izikhuthazi zerhafu ukuba iimodeli ezifanelekileyo ziya-odolwe (kuphela iifestile ezonga umbane ezifanelekileyo). Kukho uluhlu olubanzi lobungakanani kwaye zinokulungiswa kwimeko yakho nganye.
Bendlela : Ulahla indawo ebonakalayo yefestile kwisakhelo, kunzima ukuyifaka kwaye zibiza kancinci.
Izixhobo zeSash zokuTshintsha
Iinkonzo : Ukuba zifakwe kakuhle, zinokuphantse zonge umbane njengoko zinokutshintshwa iifestile; ufumana indawo ebonakalayo ngakumbi (ndigqibile nangakumbi-ngakumbi kuneefestile zam zangaphambili enye); kulula ukuyifaka; ixabiso elingaphantsi.
Bendlela : Kancinci kancinci ukusebenzisa umbane kunye nokukhetha okuncinci.
Kumava am, izixhobo ze-sash ezinokufakwa endaweni yazo zinokufakwa kwimizuzu engama-30-45 kwaye zifuna isakhono esincinci. Banoku-odolwa ngazo zonke iintsimbi ezisemgangathweni kunye neempempe kubandakanywa ne-low-e glazing, i-argon igcwele, i-tempered, i-tinted, i-obscured kunye ne-range ye-grille. Iinkampani ezimbalwa zenza i-sash iikiti zokubuyisela, kodwa enye endiyisebenzisileyo ivela IWindows kunye neMinyango (ngoku Ply Gem yeWindows ).
Uku-odola, kuya kufuneka uye kwivenkile ekwindawo ohlala kuyo okanye umthengisi webhokisi enkulu kwaye baya kukuhamba ngazo zonke iindlela onokukhetha kuzo. Ii-odolo zesiko kunqabile ukuba zibuyiswe ke qiniseka ukuba ufumana imilinganiselo yakho ichanekile! Nazi Izikhokelo ezikwi-intanethi malunga nendlela yokulinganisa iimfuno zakho zefestile. Ndiqinisekile ukuba ndibhekisa enye yezi zinto ukuze uqiniseke ukuba u-odola imveliso elungileyo.
Umsebenzi oKhanyayo wePry Bar okanye iPutty Knife
Ukulinganisa iteyiphu okanye irula
Spray Foam (ukwandisa okuncinci kweefestile neengcango)
Kwifestile nganye oyitshintshayo, kuya kufuneka ube noku kulandelayo:
Ibhalansi kit enezikali ezimbini kunye nofakelo lwezixhobo
Ikhithi ye-Sash equkethe i-sash ezimbini (enye ephezulu kunye nezantsi), kunye ne-vinyl enye yokwahlula i-bead
Susa konke ukugquma kweefestile kunye nezikrini zangaphandle. Ndabeka iplastiki emhlabeni ukuze ndichonge lonke uthuli / iinkuni kwaye ndikhusele umgangatho.
Ithetha ntoni i-999
2. Bala amanqaku kwi-Trim
Ngaphambi kokususa i-trim, ndihlala ndiyikora ngemela eluncedo ukuqinisekisa ukuba ipeyinti ayicoci, kwaye iza icocekile. I-trim esiyisusayo kukuma kwentloko kunye nokuma kwicala. Ziziqwengana ezithe tyaba ze-3/4 ″ ububanzi ezigubungela amacala efestile ukuze zibukeke zintle. Kuyenzeka ukuba ufake i-sash yokutshintsha ikhithi ngaphandle kokususa nayiphi na into encinci (istasing) ejikeleze iwindow; Nangona kunjalo, ndaye ndagqiba kwelokuba ndibuyisele eyethu ngelixa bendikho kuba ibineminyaka engama-50 yepeyinti eyakhiweyo.
3. Susa i-Trim
Emva kokufumana amanqaku, sebenzisa imela ye-putty okanye umsebenzi olula wepay bar ukususa ngononophelo iindawo zokumisa. Qinisekisa ukuba ungakuphephi ukusebenzisa udonga olungenanto ukuze udibanise. Nje ukuba ufumane indlela encinci, uhlala usebenzisa izandla zakho ukuyikhupha ngokupheleleyo. Ungayigcina ngokulula le trim (ukuba ikwimo entle) yokutshintsha xa ugqibile. Ukuba iwindow yakho inebhedi yokwahlulahlula (inokuba sisinyithi okanye isiqwenga sevinyl esivala umqala phezulu), susa nayo le nto.
4. Measure kunye noMark
Kuba kwakubanda ngaphandle, ndaye ndagqiba kwelokuba ndenze imilinganiselo kunye namanqaku ngaphambi kokususa i-sash's. Ndisebenzisa umkhombandlela womvelisi, ndiphawule indawo endizakubeka kuyo iziqeshana ezibambe ibhalansi endaweni (3 ″ ukusuka ezantsi nangaphezulu, emva koko ezimbini zibekwe ngokulinganayo emacaleni).
5. Ukubeka iibhloko zeBhalansi
Ikiti yethu yeza neebhloko zerabha ezifaka ngaphakathi ibhalansi. Sebenzisa izikhombisi zomenzi wakho, beka oku ngasemva kwibhalansi kwiindawo ezichaziweyo. Kuyinkohliso kancinci ukumisela ukuba yeyiphi indlela, kwaye iphantsi. Khawukhumbule nje ukuba icala le-angled ibhalansi liphantsi.
6. Ukususa ifestile endala
Okwangoku, ndizisusile zonke iinzipho ezibonakalayo, ndazicoca, ndacoca neefestile (ngaphakathi nangaphandle). Andikayifumani indlela entle yokwenza kwangaphambili inyathelo elilandelayo ngohlobo lweefestile ekhaya. Ukuba ii-sash's zakho nangayiphi na indlela zisuswe, yenza oko ngeli xesha. Uninzi lweefestile ezindala zifuna ukuba ususe ibhalansi kunye nebhanti kunye. Qala ngokususa ukutya okuninzi, izikhonkwane kunye nezikrufu ngangokunokwenzeka ukusuka phezulu kwibhalansi yangaphakathi. Emva koko tyibilika ifestile phezulu kwaye ususe izinto zokubopha ezisezantsi. Kuya kufuneka emva koko ukwazi ukukrola umbhinqo kwelinye icala lesakhelo, uzise ulungelelwaniso kunye nakho konke. Yenza okufanayo kwibhalansi yangaphandle kunye ne-sash. Lumka njengoko ii-sash's ziqhagamshelwe kuphela kwiibhalansi kunye nemithombo (kwimeko yam). Iifestile ezindala ziya kuba nobunzima be-sash ekufuneka busikiwe, kwaye bususwe. Igumbi apho ubunzima babekhe bahlala khona kufuneka lizaliswe ngokugquma.
7. Ukulungiselela Ukuvula
Kwakhona, coca ukuvulwa kangangoko unokususa nakuphi na ukutya, izikrufu okanye iinzipho. Gcoba nayiphi na inkunkuma, njl.
8. Ukubeka Umboniso
Usebenzisa amanqaku esiwenzile ngaphambili, qala ukubeka iiklip zentsimbi eziza kuthi zibambe iibhalansi endaweni yazo. Zincamathisela nganye ngezikrufu ezimbini kwaye kufuneka zibekwe nge-1/16 ″ kwindawo yokumisa okungaboniyo (esi sisinxibo esigcina ifestile ingawi ngaphandle). Eyona ndlela endiyifumeneyo yokwenza oku kukukrola iklip ekugungxuleni ngestop eyimfama kwaye uyitsale umva 1/16 ″ ngaphambi nje kokuba ekugqibeleni uqinise izikrufu.
9. Ukufaka iBhalansi
Nje ukuba zonke iziqeshana zifakiwe (i-4 kwicala ngalinye kule meko), ngoku ungafaka ibhalansi. Icala le-angled lihleli kwi-sill (icala elide lijonge ngaphandle) kunye necala elisicaba ngaphezulu kwejam. Qala kwelinye icala kwaye usebenzise uxinzelelo ngokuqinileyo ucinezele ibhalansi kwi umboniso. Kuya kufuneka uve unqakrazo njengoko lungena endaweni. Qinisekisa ukuba uva iifoto ezimbini kwisinye sezi kliphu. Phinda nenye ibhalansi.
10. Ukufaka iSash
Le yinxalenye yolonwabo. Qalisa ngebhanti ephezulu (leyo ingenalo iqhaga, kodwa inezixhobo zokutshixa). Gcina i-sash kunye nezikhonkwane kude nawe nangaphandle kwefestile ejonge phezulu (ihlala inesitikha kuyo). Kukho izilayidi ezincinci zeplastiki kwibhalansi oya kuthi ubeke kuyo izikhonkwane. Beka isikhonkwane sokuqala kwisilayidi seplastiki kwityala elingaphandle kunye nesilayidi phantsi ngokwaneleyo ukuze ukwazi ukujija ifestile kwaye ubeke isikhonkwane sesibini kwisilayida seplastiki kwelinye icala. Umgangatho wefestile uze uphakamise endaweni. Uxinzelelo oluncinci kuko konke okufunekayo ukuze ufumane isileyi ukucofa phakathi kweebhalansi. Phinda inkqubo yesabhantshi esezantsi, ngeli xesha ugcina isitshixo kuwe kunye nezikhonkwane kude nawe (umphandle ujonge phezulu).
11. Ukulungelelanisa nokudibanisa ubuhlalu bokuzahlula
Iibhanti zinokuhlengahlengiswa ngescrew sokuhlengahlengisa esibekwe phezulu kwisilayidi seplastiki esikalini. Inokuqiniswa okanye ikhululwe ukuvumela i-sashess ukuba ityibilike ngoxinzelelo olungaphezulu okanye oluncinci, njengoko kufuneka. Guqula i-bead yokwahlula usebenzisa i-vinyl bead bead bead.
Ngaphambi kokongeza i-trim, qiniseka ukuba ugcwalisa nasiphi na isikhewu somoya ngokugqume okanye ukwandisa igwebu (uhlobo olusezantsi lweewindows). Ndisebenzise ibhotile yonke kumjikelezo wefestile.
13. Buyisela iTrim
Faka endaweni yokuthambisa endala usebenzisa iinzipho zokugqiba okanye usebenzise itrim entsha. (Isikhokelo sokucheba ifestile sinokufunyanwa Apha kule ThisOldHouse.) Recess zonke iintloko zesikhonkwane ngeseti yezikhonkwane kunye nesando, emva koko ugcwalise imingxunya ngeplanga yomthi. Vumela i-putty ukuba yome ubusuku bonke ngaphambi kokupenda.
La ngamanyathelo endiwalandelayo kwimpumelelo ye-MW yefestile yokutshintshwa kwekhitshi ekhayeni lam. Ezinye izixhobo zokutshintsha indawo zinokulandela amanyathelo ahlukeneyo. Qiniseka ukuba ufunda zonke izalathiso zomenzi ngaphambi kokuzama iprojekthi yakho kwaye ukuba unemibuzo, nxibelelana nengcali.
Ithetha ukuthini i-11 11 ku-numerology
Ngaba ufuna ezinye iitutorials ezifanelekileyo zokwenza izinto ekhaya?
Bona zonke iiHacks zethu zokufundisa zasekhaya Gcina Ncamathisela
Sijonge imizekelo emikhulu yobukrelekrele bendlu yakho!
Ngenisa eyakho iHacks yasekhaya isifundo okanye umbono apha!
(Imifanekiso: Trent Johnson)
Okwexeshana kodwa kuyaphumelela: Iimbono ezi-5 zokufihla okanye ukunciphisa uMgangatho oMbi
Uyenza kanjani ukuya kuthi ga kwi-5 000 yeedola ngemini ngokuba neKhaya lakho leKhwezi kwiMuvi
Ezi Iinqwelo Zokugcina Izindlu Zangasese ziMihle kakhulu, Ziya kwenza nokuba isiGcinisi sakho Sijongeke sisiChic
Iindawo ezili-10 ekufuneka ujonge kuzo kuqala izipho eziMnandi, akunamsebenzi neliXesha
Ithetha ukuthini xa ubona i-444